ဓမ္မ: ဒုက္ခသည်ခရီးစဉ်အတွင်း….အနှစ်သက်ဆုံး ကဗျာနှစ်ပုဒ်
ဘာကြောင့်များ “ကပ္ပတိန်ကွတ်” ကို
ဘယ်အတွက်များ “ကိုလံဘတ်” ကို
ပိယေဟိ ၀ိပ္ပယောကော ဒုက္ခော
အပိယေဟိ သမ္ပယောကော ဒုက္ခော…တဲ့
အရိုးစင်းဆုံးသော လောကဒဏ် ကဗျာကို ရေးဖွဲ့လိုက်တဲ့သူက ကဗျာဆရာရဲထွဋ် ပါ။
အခုဆိုရင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်း (၉) ခုမှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။
ပေါ်တာနဲ့ မုဒိန်းမှုတွေနဲ့ကင်းဝေးရာ အရပ်တခု ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေသတဲ့…
ဒုက္ခသည်တွေမှာတော့ လုပ်အားကလွဲရင် ဘာမဆိုလိုအပ်နေတဲ့အတွက်
အပေးအယူမျှမျှနဲ့ပဲ ခေါ်သူကခေါ် သွားသူကလည်းသွားကြနဲ့
ဒါဆို ဒီအိပ်ခ်ျအက်စ် ကတော့လိုပါသေးတယ်။
ဆီမန်း မန်းမလို မန်းနေကြ
အိုပီအီး … Overseas Processing Entity (OPE)
ဆိုတာ ဒုက္ခသည်တွေကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေက စခန်းထဲအရောက် လာရောက်ပြီးစုံစမ်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယူအန်အိပ်ခ်ျစီအာကနေ ထိုင်းနိုင်ငံ အာဏာပိုင်များကို တရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းရှိရာကို
စခန်းတွင်းမှာ ဒုက္ခသည်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့နောက် ….
ဒါဟာ ဒုက္ခသည်များ မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ တတိယနိုင်ငံရောက်ရှိရေးအစီအစဉ်လည်း ပိုမိုနီးကပ်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်း
သိသာထင်ရှားစေတဲ့ အမှတ်သညာတခုဆိုရင်လည်း မမှားတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအိပ်ခ်ျအက်စ် (Department of Homeland Security) ဆိုတာကတော့ ဒုက္ခသည်များက အိုပီအီးတုန်းက ပြောဆိုဖြေကြားချက်တွေကို ထပ်မံအတည်ပြုမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခြင်းတို့ကို တဆက်တည်းဆောင်ရွက်ပေးချိန်ပါပဲ။
ဒီအိပ်ခ်ျအက်စ်မှာ စစ်ဆေးသူများရဲ့ စိတ်ကြိုက်ဖြေဆိုပေးနိုင်ရင် အထူးသဖြင့် တီဘီပိုးရှိတယ်လို့လည်း သံသယအဖြစ်မခံရဘူးဆိုရင်…
ဒီပတ်ချာဒိတ် (Departure Date) စောင့်နေယုံပါပဲ။
အရှေ့နဲ့ အနောက်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါင်းစုံဖြစ်တဲ့
တောထဲမှာ မျှစ်ချိုးစားနေရသူတွေ ချက်ခြင်းစားရတော့မယ့် ဒိန်ခဲနဲ့ ထောပတ်အပြောင်းအလဲကာလများ….
တောထဲမှာ တပိုတပါးသွားကျင့်ရှိနေသူများ လေယာဉ်အိမ်သာခန်းထဲမှာ ကြုံတွေ့ရမယ့် ဒုက္ခတွေအတွက်
ရေပူ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးရန်နည်းစနစ်ပါမကျန်…
ရက်တို သင်တန်း (၃) ရက်နဲ့ ဘ၀တပါးကို အရှင်လတ်လတ်ကူးပြောင်းရေးကျင့်စဉ်များသင်ကြားပေးခြင်းကိုတော့
(စီအို) လို့ လူသိများပါတယ်။ အဲဒီသင်တန်းကို လူတိုင်း စိတ်ဝင်တစားသွားတက်ကြတယ်၊
( မတက်ရင် လေယာဉ်လက်မှတ်မရနိုင်လို့ပါ… )
ဒုက္ခသည်စခန်းကို နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းကလူတွေကို ဒုက္ခသည်စာရင်းတင်ထားတဲ့ နံပါတ် (၂၀၈၆)ယောက်ကိုသွင်းစဉ်က
ကဗျာဆရာ အေအမ်တီရဲ့ နို့ဖိုး …ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးတပုတ်ထွက်လာခဲ့တာကိုလည်း အခုတခါပြန်ပြီးသတိရမိတယ်။
ဒုက္ခ ဆိုတာ အတုမရှိဘူး
တော်လှန်ရေးနယ်ပယ်ထဲမှာ ဒဏ်ခံနိုင်သူတချို့တလေက တတိယနိုင်ငံဆိုတဲ့စကားကို ကြားချင်လေ့မရှိကြဘူး။
ဒဏ်မခံနိုင်သူအတော်များများကတော့ မျိုးဆက်သစ် တိုးတက်ရစ်ဖို့….ဆိုပြီး တတိယနိုင်ငံကို အသွင်ကူးပြောင်းရေးရေယာဉ်ကျောထဲ
အဲဒီထဲက တချို့ တချို့သောသူတွေကတော့ အနီးဆုံးလက်တွဲဖော်အဖြစ် မြန်မာပြည်က
တချို့ကတော့လည်း တတိယနိုင်ငံကို စရိတ်ငြိမ်းသွားနိုင်ဖို့
I swear to tell the truth….
လို့….လက်ယာဘက်လက်ကိုထောင်ပြီး ကျိန်ဆိုထားသည့်တိုင် အစိုးရက နှိပ်စက်လို့ မနေ၀ံ့တော့လို့ပါ…ဆိုတဲ့ မုသာဝါဒကံနဲ့အတူတူ…
တချို့ကျတော့လည်း အမှန်ကိုသာပြောပါ…လို့ သတိပေးထားတဲ့ အဲဒီ အင်တာဗျူးတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကိုက သူတို့လိုချင်တဲ့အဖြေမရမချင်း ဘောင်သွင်းမေးလွန်းလို့ မလိမ်ချင်ဘဲလည်း လိမ်ပေးလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်း ရှိသေးရဲ့။
တော်လှန်ရေးနယ်ထဲမှာနေတဲ့ တယောက် နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်တော့ သူ့ညီမက သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ ဒီဘက်ကို လိုက်လာရတယ်။
အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပုံစံမေးခွန်းတခုကိုမေးပါတယ်။
အကို့ကို ပြုစုဖို့လာရပါတယ်…ဆိုတဲ့အဖြေကို သူတို့မကြိုက်။
အကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းမှုမရှိဘူးလား…ဆိုတာကို ထပ်ခါထပ်ခါမေးလာတဲ့အခါ….
ဘယ်လိုစစ်လည်းမေးတော့ မညာတတ်သူပီပီ မုသားလွတ်အောင် သန်းကောင်စာရင်းခဏ ခဏစစ်တယ်ဖြေလိုက်ပေမယ့် မေးသူကစိတ်တိုင်းမကျ။ အကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဖမ်းခံရသေးလားဆိုတာကို လိုချင်သည့်အဖြေမရမချင်း ထပ်ခါတလဲလဲမေးနေတယ်။
”နောက်ဆုံးကျတော့ အတွေ့အကြုံရနေတဲ့ စကားပြန်က “ကဲပါ ညီမရယ်။ ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင် နောက်တရက်ဆက်မေးခံနေရလိမ့်မယ်။ အကို မရှိလို့ ဘယ်သွားလဲမေးတာ မဖြေနိုင်လို့ (၃) ရက်လောက်အချုပ်ခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့်ထွက်လာရတယ်လို့ပဲ ကျနော်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်…လို့ခွင့်တောင်းပီး ကျနော့်ကို အချုပ်ထဲ သုံးရက်လောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အမရယ်“ လို့ အင်တာဗျူးကအပြန် မှာအတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့တာကို သတိရမိတယ်။
မလိမ်ညာပါဘူး။ အမှန်ကိုပဲပြောပါ့မယ်လို့…လက်ထောင်ကျိန်ခိုင်းပြီးတော့မှ လိုချင်တဲ့အဖြေရသည့်အထိ
မလိမ်မချင်း ချောင်လိုက်ပိတ်နေတာကတော့ စိတ်ခံစားချက်ကို တမျိုးဖြစ်စေတာအမှန်…
အလုပ်သမားလိုအပ်နေသူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ သူတို့ဘက်က ဘာမှ ကျိန်စာတိုက်နေဖို့မလိုပါဘူး။
မြန်မာပြည်ထဲက အဓိကအထွက်အများဆုံးအကြောင်းအရင်းကတော့ အစိုးရဲ့ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့်
သည်ထဲမှာမှ စီးပွားဖြစ်လုပ်စားချင်သူ တချို့တလေ ရောနှောညပ်ပါနေတာတော့ ဘယ်နှယ်လုပ်ရွေးထုတ်နိုင်ပါ့မလဲ။
ဒုက္ခသည်အတု တော်လှန်ရေးသမားအတု…တွေရဲ့ အမေရိကန်သို့ စရိတ်ငြိမ်းခရီးစဉ်မှာ
လိမ်ညာတာကို ဒါလေးများ….ဒါလေးများလို့တောင် သီချင်းဆိုနေကြမည့်သူတွေ…..
ရှိနေတတ်တာ ဟောဒီဘဒ္ဒကမ္ဘမှာ လူ..ဆိုတာဖြစ်တည်ကတည်းက ဒွန်တွဲပါလာပြီးသား ကံကြမ္မာတခုလို….
ဆိုတဲ့အတိုင်း ကူညီလိုတယ် ဆိုသူတွေက ခေါ်နိုင်သလောက်လူတွေကို ခေါ်သွားဖို့ပါပဲ။
အဲဒီ ပြန်လည်နေရာချထားရေးယဉ်ကျေးမှုစီးကြောင်းထဲမှာ အလိုက်သင့်မျှောပြီး လိုက်ချင်သူတွေက လိုက်ပါသွားကြပါလိမ့်မယ်။
ကျန်ရစ်သူတွေထဲမှာတော့ သားတကွဲ …မယားတကွဲတွေရဲ့ နာကျင်မှုတွေ….
မိတ်ဆွေသင်္ဂဟတွေရဲ့ ရွေ့လျားဝေးကွာရတဲ့ အထီးကျန်ဝေဒနာတွေ….
မြန်မာ့အရေးလုပ်စရာတွေတပုံကြီးနဲ့ လုပ်မယ့်သူတွေရဲ့ တကယ့်လက်တွေ့အလုပ်ပုံကြီးအောက်က အနားမရတဲ့နေ့ရက်တွေကြားမှာ….
ထွက်ခွာသွားနိုင်ရေး လုံ့လပြုနေသူတွေအပေါ်မှာလည်း အပြစ်မတင်သာ….
တဖြေးဖြေးလျော့ပါးလာတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကို ပြန်လည်အားကောင်းလာအောင်မျှော်လင့်ရင်း……
အမုန်းဆုံးသူ “တစ်” နဲ့ “နှစ်” ဟာ
သူ နဲ့ သူပေါ့
Nargis & Neglect
ဂါမဏိ ဆောင်းပါးများ.... -၁၃၅ -အကယ်ဒမီ -တတိယလှိုင်းခေတ်ပြောက်ကျားစစ် -အ၀ိဇ္ဇာထိပ်ခေါင်မြန်မာ့လူ့ဘောင် -အွန်းသည်အဲလီးဖင့် -နအဖအစ ပုံတောင်ပုံညာက -ဒေါက်တာသန်းထွန်းသို့တမ်းချင်း -ဂျော်ဂျီယာသင်ပုံးကြီး -မလွတ်လပ်ရေးနေ့များအကြောင်း -သတင်းစာဆရာများသည် သမိုင်းကိုပြောနေသည် -မြ၀တီစာအုပ်တိုက်အတွက်ကြော်ငြာဆောင်းပါး -နအဖ၏နောင်ရိုးစိတ်ဓါတ် -ညောင်နှစ်ပင်တန်းစီမရ..လုံးဝ -အဆုံးမရှိ -ပတာနီလမ်းစဉ် -တဖက်အဖွဲ့အစည်းများလိုက်နာရန် -ကန်ထရိုက်စစ်သား -နင်းပြားတို့အတွက်ဖြေရှင်းချက် -လန်ဒန်ရောက်ကာမီကာဇေ -အကြမ်းဖက် -တပ်မတော်မဟုတ်တော့သော စစ်တပ်... -လမ်း... -ဂန္ဓီနှင့်အောင်ဆန်း... -အမေရိကန်စစ် တရုတ်စစ် ဗမာစစ် -ရေဝေစည်းကြောင်းများပျက်ယွင်းချိန်
- ငါဟာမိန်းမ (လင်းလွင်)
- ဆွံ့အသူ (ခင်မေနှင်း)
- ကဗျာကိုရှာတွေ့ခြင်း (အောင်ပင်လယ်)
- ၉၂နှစ်ပြည့်လူထုအမေသို့အလွမ်းစာ (ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ)
- ၉၂နှစ်ပြည့်မွေးသမိခင်သို့ပေးစာတစောင် (ဖိုးသံ..လူထု)
- အရုဏ်ဦးဆိုတာ ရင်နဲ့ပျိုးယူရတယ် (မြတ်သစ်)
- အ...ညီလာခံ ကမာပုလဲ
- ဂေါ်ဂီရဲ့အမေ၊အနှစ်တရာပြည့်ပြီ ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း
- အဝေးကပေးစာတစောင်(၂၅၊၁၊၀၈) ယာတောကသာဗြော
- လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာ.. ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း
- သူ သို့မဟုတ် မပြီးသေးသောပန်းချီကား ဖိုးသံ-လူထု
- အဝေးကပေးစာတစောင်(၂၆၊၁၂၊၀၇) ယာတောကသာဗြော
- အနှစ် ၆၀လွန်တဲ့အခါမှာ ဗသြ
- အဝေးကပေးစာတစောင်(၂၆၊၁၁၊၀၇) ယာတောကသာဗြော
- နအဖရဲ့ရှေ့ခြေလှမ်းကိုရိုက်ချိုးဖို့ပြင်ကြစို့ ဗသြ
- လူထုအတွက် လူထုဖက်က လူထုဒေါ်အမာ ၀င်းတင့်ထွန်း
- တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှုင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ် ဗသြ
- ဘွာမကူတမ်း ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း
- အဝေကပေးစာတစောင်(၂၈၊၉၊၀၇) ယာတောကသာဗြော
- ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူးအစီရင်ခံစာ ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ
- အားလုံးသို့ (၁/၂၀၀၈) ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၊ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ
- (၁/၂၀၀၈)(၂၈-၂-၂၀၀၈)ဖွတ်မြည်းနဲ့ဖွတ်ကိုချည်ကြဖို့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
- စစ်တပ်နှင့်နိုင်ငံရေး ပထမပိုင်း
- စစ်တပ်နှင့်နိုင်ငံရေး ဒုတိယပိုင်း
- စစ်တပ်နှင့်နိုင်ငံရေး တတိယပိုင်းနှင့် နိဂုံးပိုင်း
- ကြိုးစင်ပေါ်ကမှတ်တမ်းများ အခဏ်း(၁)
- ကြိုးစင်ပေါ်ကမှတ်တမ်းများ အခဏ်း(၂)
- ကြိုးစင်ပေါ်ကမှတ်တမ်းများ အခဏ်း(၃)
- ကြိုးစင်ပေါ်ကမှတ်တမ်းများ အခဏ်း(၄)
- ကြိုးစင်ပေါ်ကမှတ်တမ်းများ အခဏ်း(၅)
- ကြိုးစင်ပေါ်ကမှတ်တမ်းများ အခဏ်း(၆)
ကြိုးစင်ပေါ်မှမှတ်တမ်းများ (အိုးဝေဦးထွန်းအောင်နှင့်ဦးစံရွှေ) ချက်ဘာသာမှ မြန်မာပြန်ဆိုသည်
Myo Myint Htun
ဒီမို ဂါထာ ၃ပုဒ်
တနေ့ ၃ ခါ
ဂါထာ ဤ ၃ ပုဒ်။
၂၀၀၇ အောက်တိုဘာ ၁၆
လူကိုခွေးသတ်.... သံဃာကိုခွေးသတ်... ဗုဒ္ဓကိုလဲချမ်းသာမပေး...
ရက်စက်ပါပေ့ နအဖရယ် ..
ဆီရွှဲပြီး နက်ပြောင်နေတဲ့ ဆံပင်ကို
သနပ်ခါးကို မှုန်နေအောင် လိမ်းထားတဲ့
အိပ်ရာထ၊ မျက်နှာသစ်၊ အ၀တ်လဲ
“ခလေးတွေ သတ္တိ ရှိလိုက်ကြတာ
ဘလော့ခ်ဂါများ.... ကလိုစေးထူး ကဒေါင်းညင်သာ ယမုန်နာ ဟင်းလင်းပြင် ရွှေဝါရောင် ကိုသြ မာယာ ဆုံဆည်းရာ မိုးသီးဇွန် ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ရွက်မွန် ဒေါင်းမာန်ဟုန် ဇာဂနာ မျိုးချစ်မြန်မာ ကိုဖိုးဇေ ကိုဈာန် ကိုမောင်ရင် စေတန်ဂေါ့ ထားဝယ်သား မာန်လှိုင်းငယ် ကေသွယ် ဂျစ်တူး အိမ်ချမ်းမြေ့ ခင်မင်းဇော် မမေငြိမ်း မသဒ္ဒါ ပုတုဇဉ် နစ်နေမန်း ယောဟန်အောင် စိုးဝှက် ကိုရန်အောင် အိပ်မက်အိမ် စိတ်ကူးတေးသီ လင်းလက်ကြယ်စင် ကိုထိုက် ပန်ဒိုရာ သမိုင်းထဲကရက်စွဲများ အာဏာရှင်ကို တော်လှန်ခြင်း လူဆိုးစာရင်း... ကောင်းကင်ကို ငြိမ်ချမ်းအောင် နယ်ခြားမဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါများ မောင်လှ SAW ဦးဂင်ကြီး ကိုလူလှ ကနေဒါမြန်မာ